ဒီနေ့တော့ ရွာထဲက လူပြိုဂျီးတွေအတွက်ပါ…….. အထူးအစီအစဉ်ပါတယ်နော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီနေ့တော့ ရွာထဲက လူပြိုဂျီးတွေအတွက်ပါ…….. အထူးအစီအစဉ်ပါတယ်နော်
ဒီနေ့တော့ ရွာထဲက လူပြိုဂျီးတွေအတွက်ပါ…….. အထူးအစီအစဉ်ပါတယ်နော်
Posted by Thuyazaw on Feb 3, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
သမီးရဲ့ ပို့စ်လှလားဟင်……လူပျိုဂျီးတွေ စဉ်းစားပေးနော………….မီးလဲ စဉ်းစားနေတယ်……..ခိခိ သာမီးက အသားအရည်လေးလဲလှ စတိုင်လေးကလဲ လန်းလန်းနော………အတွေးမမှားနဲ့ ဟွန့် စတိုင်ခပ်လန်းလန်းလေးကြိုက်သူများအတွက်……..ဟိဟိ တမီးကတော့ ဒီလို သိက္ခာလေးနဲ့ပေါ့နော် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေး ရယ်တတ်ပါတယ်ချင့်
ကဲ ရွာသားများအတွက် ကျွန်ုပ် Thuyazaw21451 မှ စွန့်စွန့်စားစား ရှာဖွေဖမ်းဆီး အဲလေ… ရှာဖွေပေးထားတဲ့ သင်တို့ရဲ့သတို့သမီးလောင်းများကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် Thuyazaw21451@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း……သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်………. အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ပထမဆုံးရောက်လာသူအား ဆာဖာရီဥယျာဉ်အတွင်းမှ ချန်ပန်စီမျောက်အား ဖင်နှိုက်၍ နင်မိုက်လားမေးခိုင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…………….ပုံ /Thuyazaw21451
လူပြိုဂျီးပဲ လုပ်တော့မယ်..လူပြိုဂျီးပဲ လုပ်တော့မယ်ဝေ့..
ဂုဏ်ယူပါတယ်….ဂုဏ်ယူပါတယ်…….. အခုလို ပထမဆုံးလာရောက် အားပေးတဲ့အတွက် အထူးအစီအစဉ်နဲ့ ဘောင်ဝင်ပါတယ်………. ဒါကြောင့် ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်အနေနဲ့ အထူးအစီအစဉ်ကို လက်ခံပေးပါခင်ည…………..ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း….. (ရပ်နေကြသည့် အပင်မှ သစ်ကိုင်းများကျိုးကျသံ…………)
ရွာထဲက လူပြိုဂျီးတွေဖြစ်တဲ့ မစ်ချတာပေတို့ ..အူးကင်းတို့ ..အူးဖျဲတို့ ကို အူးစားပေးလိုက်ပါကွဲ့ 
အတော်ပဲဒေါ်လှတူလေး ကပေါက်ဖော်အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး (မြန်မြန်စာရင်းပေးထားနော်)
မစ်ချာပေ အစ်စ် နော့ စင်ဂဲ
အိုင် ဟဖ် မယ်ရီ
ကပေါက်ဖော် ကသူ့အတွက်အောက်ဆုံး ၃ဦးကို ချန်ထားပေးပါတဲ့..
ကိုကင်းကလဲ အသစ်ကလေးတွေ ရရင်သူ့ကိုအရင်ပြောပါတဲ့..
ကျနော်ကတော့ ကလေး၃ယောက်အဖေ ဆိုတော့အဝေးကပဲ နေတော့မယ်ဗျ..
ပြိုင်ဘက် တစ်ယောက်လျော့သွားလို့ ..၀မ်းသာလှပါဘိတောင်း
amatmin ရေ သတင်းကောင်းပါတယ်ဗျ ကလေးသုံးယောက်အဖေလဲ စဉ်းစားပေးပါတယ်တဲ့..
ကျနော့ ကလေးတွေက..မိုးယု.၀တ်မှုံ နဲ့ အောဆိုင်း ဗျ..
အဲ့ကလေးတွေ နဲ့ပဲ ပျော်သလိုနေတော့မယ်..
ဒါနဲ့ လူပျိုဂျီးတွေ အတော်များသား ဟ..
အောင်မျလေးနော်…… ရင်တောင်ခုန်သွားတယ်… ကြောက်လို. ဟိဟိ…
ကိုရင်စည်သူတို့ ကို ကမ်းကြီးတို့ ၊အီးတီတို့ စဉ်းစားကြနော် တို့ကတော့ ..တို့ကတော့
အမလေးဂျ တောပါပီ ဆရာသူရဇော်ရေ။ကြောက်ပါပီ။